नेपालकै सर्वाेत्कृष्ट गाइपालक पन्तले एक लाख एक हजार १११ काे पुरस्कार पाउने – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७७, २६ आश्विन सोमबार २०:०६
गाेरखाकाे पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ च्याङ्ली मा रहेकाे कामधेनु गाइफार्मका सञ्चालक राजेन्द्रराज पन्तले सर्वाधिक राशीकाे पुरस्कारका लागि छनाेटमा परेका छन् ।
रुद्र गौरी श्री अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले यस वर्षको रुद्रप्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय कृषि पुरस्कार गोरखा जिल्लाका गाईपालक कृषक राजेन्द्रराज पन्तलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । झापामा रहेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद ओलीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो । पुरस्कारको राशि रु. एक लाख एक हजार १११ रहेको छ ।
नेपालमा कृषकले पाउने यो सर्वाधिक नगद राशिको पुरस्कार हो । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका—७ च्याङ्लीमा पन्तले २०५२ सालदेखि कामधेनु गाईपालन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय रुपमा उदाहरणीय कार्य गर्ने किसानलाई प्रतिष्ठानले वर्षेनी पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
पुरस्कार पाउने पन्तको गाईफार्ममा ३५० वटा गाई पालिएको र दैनिक एक हजार ३५० लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । उहाँले नमुना डेरी केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र समेत सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण यो पुरस्कार सहज अवस्था आएपछि मात्र वितरण गरिने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो ।